स्वास्थ Archives - Page4of 18 - Dna Nepal
गण्डकी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष अर्याल सहित ९ कर्मचारी धरौटीमा छुटे ९ बैशाख २०७६, सोमबार १६:५१
पोखरा, बैशाख ९ । ठगी आरोपमा विद्यार्थीले उजुरी गरेपछि कास्की प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गर्यो । फागुन २१ गते पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि गण्डकी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्याल सहित ११ कर्मचारी फरार भए । पक्राउ पुर्जी काटेकै भोलिपल्ट कास्की..
१७ लाख धरौटीमा छुटे गण्डकी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्याल
पोखरा, बैशाख ९ । गण्डकी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्याल धरौटीमा रिहा भएका छन् । कास्की प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि फरार अर्याल सोमबार जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएका हुन् । उनी वकिल सहित सोमबार अदालत हाजिर भएका थिए । जिल्ला न्यायधिस..
यौन आनन्द लिन अपनाउनुहोस् यस्ता आशन ४ बैशाख २०७६, बुधबार ११:३२
एजेन्सी, बैशाख ४ । श्रीमान–श्रीमतीबीच हुने यौन सम्पर्कले कस्लाई बढि यौन आनन्द भएको होला ? पुरुष यौन साथीलाई रमाइलो हुँदा आफूलाई दुई गुणा रमाइलो भएको अनुभूति श्रीमती अर्थात प्रेमीकाको हुन्छ । तर, महिलाको यौन चाहना भने पुरा हुदैँन् । महिलालाई..
एक वर्षलाई ६ सय ६४ दिनको कीर्ते गरि भत्ता खाने डाक्टरलाई राष्ट्रपतिको सम्मान ३ बैशाख २०७६, मंगलवार ११:३९
काठमाण्डौं, बैशाख ३ । देशका लागि महत्वपूर्ण योगदान गरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ वर्षका दिन विभिन्न व्यक्तिलाई मानपदवी दिएर सम्मान गरिन् । राष्ट्रपतिबाट सम्मानित हुनेमा स्वास्थ्य क्षेत्रबाट २८ जना छन् । तीमध्येका एक हुन्,..
नेपालमै अनौठो–एकै पटक तीन बच्चाको जन्म २८ चैत्र २०७५, बिहीबार १२:४९
लहान, चैत २८ । सिरहामा एक महिलाले तीन सन्तान जन्माएकी छन् । तीन सन्तान जनमाउनेमा सप्तरी खडक नगरपालिका २ को २७ वर्षीया श्याम कुमारी सदाय रहेकी छन् । उनले बिहान ९ बजे तीनवटा छोरा जन्माए पनि केही घण्टा नबित्दै दुईको मृत्यू भएको छ । सुत्केरी व्यथा..
सावधान ! पिउने पानीमा दिसाका कण भेटियाे २५ चैत्र २०७५, सोमबार ०१:१६
काठमाण्डौं, चैत २५ । शुद्ध प्रशोधित भन्दै विभिन्न ब्राण्ड दिएर विक्री गरिएको पिउने पानीमा कोलिफर्मको जीवाणु भेटिएका छन् । कोलिफर्म दिसामा पाइने जीवाणु हो । खाद्य, प्रविधि तथा गुणनियन्त्रण विभागले शुद्ध पिउने पानीको ब्राण्ड दिएर विक्री वितरण..
एउटालाई लगाउनु पर्ने सुई अर्कोलाई लगाएपछि विरामीको मृत्यु ! २१ चैत्र २०७५, बिहीबार ०३:४९
पोखरा, चैत २१ । पोखराको मनिपाल अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीको लापरबाहिका कारण बिरामीको मृत्यु भएको आरोप लगाइएको छ । मंगलबार साँझ अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले एउटा बिरामीलाई लगाउनु पर्ने सुई अर्कै बिरामीलाई लगाईदिएपछि बागलुङ जैमनी वडा नम्बर ८ का..
नराम्रा सपना देख्नुहुन्छ ? यसो गर्नुस् २० चैत्र २०७५, बुधबार १८:४२
एजेन्सी, चैत २० । कहिलेकांही त नराम्रा सपना देखेपछि रातको बीचैमा हाम्रो निद्रा खलबलिन्छ । यसले हामीलाई मानसिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्यमा पनि असर गर्छ । जब हामी सुत्छौँ, हाम्रो शरीरले आफूलाई आवश्यक शक्ति सन्चय गर्न थाल्छ । तर, कहिलेकांही यस्ता..
थाहै नपाई १४ बर्षिया बालिका गर्भवती (यस्तो छ कहानी) १३ चैत्र २०७५, बुधबार ०१:२२
राजविराज, चैत १३ । १४ वर्षीया बालिका ‘थाहै नपाई’ गर्भवती भएकी छन् । पेटको तल्लो भागमा पीडा भएको बताएपछि आमाले उनलाई डाक्टर कहाँ र्पुयाएकी थिइन् । भिडियो एक्सरे गर्दा गर्भ बसेको देखिएपछि उनको परिवार चिन्तामा परेको छ । मजदुरीमा जाने गरेकी आमाले..
गण्डकी मेडिकलका अध्यक्ष अर्यालसहित फरार सञ्चालकलाई पक्रन सिआईबी परिचालन ११ चैत्र २०७५, सोमबार ०२:०८
पोखरा, चैत ११ । गण्डकी मेडिकल कलेजका फरार रहेका अध्यक्ष खुमा अर्यालसहित ९ जनालाई पक्राउ गर्न कास्की प्रहरीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोसँग सहयोग मागेको छ। ब्युरो प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक निरजबहादुर शाहीले फरार व्यक्तिको खोजीमा सहयोग..